कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ? जान्नुहोस – Annapurna Daily
कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ? जान्नुहोस
On Jul 27, 2021 815
धर्मशास्त्र । सनातन धर्मको मान्यताअनुसार ३३ करोड देवी–देवता छन् । यी सबै देवी–देवताको पूजा एकसाथ गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले हरेक बारको आफ्नै महत्व रहिआएको छ । यद्यपि, कुनै–कुनै दिनमा भने विशेष देवी–देवताको पूजाअर्चना गर्दा सांसारिक कामना पूरा हुने जनविश्वास छ ।